Ticwatch laghachi na elekere abụọ nke gam akporo Wear 2.0 | Gam akporosis
Ticwatch laghachi na elekere abụọ nke gam akporo Wear 2.0
Ticwatch nwere ike ọ gaghị ada gị nke ọma, mana na 2016 ọ malitere mkpọsa Kickstarter na, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ puku ndị na-akwado ya, bụ nnukwu ihe ịga nke ọma. Ihe oru ngo a bu smartwatches abuo nke anakpo Active na Omuma nke nyere otutu ihe omuma ya na ihe omuma di elu ma ndi oru enweghi obi uto na onu IP65 ha ma obu ulo oru Ticwear nke ulo oru.
N'ihi nke ahụ, ụlọ ọrụ ahụ kpebiri na ọ kwesịrị ige ndị ọrụ ntị n'ụzọ dị otú ahụ ohuru Ticwatch S na Ticwatch E dabere na nzaghachi ndị ọrụ, inwe ike ịghọ otu n'ime smartwatches kacha mma na gam akporo Wear na ahịa.
Ticwatch S na Ticwatch E
Mgbe ihe ịga nke ọma kamakwa mgbe nkatọ na-aghọrọ na mbụ Active na kpochapụwo ụdị, ike Ticwatch mụtara site na ahụmịhe ya wee kpebie ịtụle tebụl na nkatọ ndị ọrụ n'ụzọ dị mma na nke bara uru. imepụta ma bido smartwatch nke ndi kwesiri inweta ya choro. Ma otu a ka esi mụọ ọhụrụ Ticwatch S na Ticwatch E smartwatches, ụdị abụọ dị ugbu a n'etiti mkpọsa ego na ikpo okwu Kickstarter, otu nke hụrụ ndị bu ha ụzọ amụrụ.
Dika inweela ike ikwuputa site na mbido akwukwo a, ikekwe nnukwu ihe di iche na di na nwunye ohuru a nwere ike igbanwe ulo bu mgbanwe nke sistemụ. Ọ bụ ezie na ụdị ndị gara aga jiri Ticwear OS, sistemụ azụmaahịa mepụtara site na ika, ugbu a ụlọ ọrụ ahụ kpebiri ịkụ nzọ na gam akporo Wear 2.0 na-edochi ya maka nke a. Ala a na-egosi na, ma ị zụrụ ụdị "Express" ma ọ bụ na ịchọrọ ị nweta ụdị "Sport", n'ọnọdụ abụọ ị ga-enwe ohere zuru ezu na Playlọ Ahịa Google Play, yana ọrụ ndị dị mkpa gam akporo Wear 2.0 na-enye., Dị ka Google Assistant, Google Fit, na ndị ọzọ.
Na mgbakwunye, ma smartwatches abịa na a igwe okwu na igwe okwu n'ụzọ dị otú ahụ na ndị ọrụ ga-enwe ike ijikwa ngwa ndị nwere onwe ha ma nwee ike ịza oku site na nche na-enweghị imetụ ekwentị ha aka.
N'aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ ahụ egosiwo na ụlọ ọrụ ahụ na-ekwu na e wuru GPS dị n'ime Ticwatch S na E smartwatches nke ọma. N'ụzọ nke a, GPS ugbu a ruru ugboro atọ karịa nke ziri ezi ma na-enye ọtụtụ ihe ngwa ngwa satellite geoposition, karịsịa na ụdị Ticwatch S, yana antenna GPS ejiri n'ime igwe elekere na-enye nkenke ka ukwuu.
Banyere iguzogide ájá na mmiri, ngwaọrụ abụọ ahụ nwere Asambodo IP67 nke a jikọtara ya na ọrụ ndị na-adịkarịrịrị na nke a na-ejikarị ụdị ejiji a, dịka nsuso usoro, njikwa usu, wdg. Ugbu a, ekele maka nhazi ọkwa a, ọrụ ahụ ga-aga n'ihu na, yabụ, zuru oke ma zuo oke.
Egwuregwu Ticwatch dị ntakịrị karịa ụdị Express (45mm na 44mm n'otu n'otu), ha abụọ abatala 1,4 inch OLED ihuenyo nwere mkpebi nke 400 x 400 pikselụ. N'ime ha ụlọ a MediaTek MT2601 nhazi dual-isi na-esonyere 512MB RAM, nchekwa 4GB ime na a 300 mAh batrị. Na mgbakwunye, ha na-enye ọrụ nke Nchaji ikuku ma ha nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe mmetụta niile nke onye ọrụ chọrọ: ihe mmetụta sensọ, accelerometer, yana gyroscope.
Maka ego ya, onyinye izizi na Kickstarter amalite na $ 119 maka ụdị Ticwatch E na nnyefe echere maka November ọzọ, mgbe egwuregwu egwuregwu nke nche ahụ malitere na ọnụahịa mkpọsa nke $ 139. Ndị ọzọ na-enye na-dịnụ na-agụnye ngwa si ụlọ ọrụ dị ka Bluetooth ekweisi ike igwu egwu 6 awa nke music na otu ụgwọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » smartwatch » Ticwatch laghachi na elekere abụọ nke gam akporo Wear 2.0
Nlele ụda dijo
Ihe nchegharị ọhụrụ ndị a nke android dị egwu! M hụrụ ha n'anya <3 Na price, nnọọ oké ọnụ, adịghị ị na-eche?
Ihe ohuru ohuru na Google Pixel XL 2 na-ekpughe ozi di egwu
Windows ekwentị gafere DEP